Sida loo iibsado muraayadaha dabiiciga ah ee Siem Reap?
muraayadaha dabiiciga ah, Siem Reap
Haddii aad boggan xiriiriso, waxaa laga yaabaa inay noqoto mid goor dambe.
Ka hor inta aan la iibsan muraayadaha dhagaxa ama dahabka Siem Reap, waa muhiim inaad akhrido macluumaadka hoose.
Siem Reap waa mid ka mid ah meelaha adduunka ku yaala halkaas oo ay ku jiraan argagixiso ugu badan.
Sida goobaha dalxiiska, sida wax walba waa been abuur. Waxaa jira lacag aad u tiro badan oo ka yimaada dalxiisayaasha alaab been abuur ah, iyaga oo si fiican u fahamsan in dalxiisayaashu aysan waligood ku soo noqonayn cabashada, marka ay ku laabtaan dalkooda.
Mucjisada Gemstone waxay u dhigantaa tobanaan kun oo kun oo doollar maalintii oo ah xilliga dalxiisku hooseeyo, iyo dhowr boqol oo kun oo doolar maalintiiba inta lagu jiro xilliga sare, laga bilaabo Nofeembar ilaa Maarso.
Tani waa habka ugu wanaagsan ee lagaga xardhigi karo dalxiisayaasha, iyadoon rabshad iyo qosol.
Haddii aad nasiib badan tahay, dadku iskuma dayi doonaan inaad khiyaameeyaan, laakiin ku dhawaad ​​dhammaan dadka aad weydiisatid talo waa qayb ka mid ah maafiyada weyn. Sidaa ha u aamina qof: hage dalxiis, marti hudheellitaal, wadaha baska, darawal taxi ...
Maalin kasta waxaan aragnaa dadka imanaya machadka maraakiibta, kuwaas oo ogaanaya in la raray. Waxay yimaadaan si ay u tijaabiyaan dhagaxyada ay ku jiraan shaybaarka ka dib markii aan cinwaankayaga ka helno Google, laakiin mar hore waa la soo dhaafay. Laga soo bilaabo xilliga uu macaamiisha ka baxo dukaanka, way dhammaatay. Ma jirto wax lacag celin ah.
Ma tirin karno inta jeer ee aan arkeyno haweenka oohin markii ay ogaadeen in ay qarnigii ama kumanaan doolar ku qarxiyeen miraayad been abuur ah iyo dahab been abuur ah
Dhab ahaantii, waxaa jira dukumiintiyo maraakiibta been abuurka ah, kuwaas oo la wadaago faa'iidada leh dhammaan dukaamada, hudheelka hoteelka, darawalka, hagaha, iwm. Kuwan been abuurka ah waxay bixiyaan 50% qiimaha iibka ee dadka
Waa wax aad u fudud inaad u sheegto dalxiisayaasha sababtoo ah ma fahmayaan luuqada degaanka, waxayna ku soo dhaweeyeen nacaybka iyo raaxada saaxiibadooda cusub.
Haddii aad weydiisatid dhexdhexaad si aad nala soo xiriirto si aad u hesho buug, waa kuwan tusaalayaal ah waxa ay kuu jawaabi doonaan: (kuwan waa marqaatiyaal macaamiishayada)
- "Waxaan isku dayay inaan waco telefoonka, laakiin dukaankan waa la xidhay"
Dhab ahaantii, waa khalad! Waxaan furanahay sanadka oo dhan. 7 maalmaha wiiggii, 9 ilaa 10
- "Dukaankan ayaa iibiya dhagaxyo been abuur ah, laakiin waxaan haystaa saaxiib aan dukaanku leeyahay, waan garanayaa sanado 20, waad ku kalsoonaan kartaa. "
Dhab ahaantii, waa khalad! Waxaanu iibinaa oo kaliya muraayadaha dabiiciga ah, waxaanan nahay kuwa kaliya!
- "Aad bay uga fog tahay hudheelkaaga, waxaa jira meel ka wanaagsan oo ka fog"
Dhab ahaantii, waa khalad! Waxaanu ku yaalaa magaalada Siem Reap
- "Dukaankani hadda ma jiro, way xiranyihiin, laakiin waan ogahay dukaamo fiican, haddii aad rabto, waxaan kuugu kaxayn doonaa"
Dhab ahaantii, waa khalad!
Waxay aadi karaan meel aad u fog oo been ah oo wax lagu macaamili karo. Waxay ku sii hayn karaan inaad sugto maalmo, ilaa aad jabiso oo aad ogolaato inaad tagto dukaanka kale ee ugu dambeeya, ka hor intaadan duulin. Halkaas ayaad tagtaa! Ugu dambeyntii waad soo daadatay!
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad keligaa buxiso. Sidaa darteed, waxaad noqon doontaa 100% ammaan ah. Waxaanu bixinnaa gaadiid bilaash ah hudheelkaaga. (Safar gaaban)
Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Waxba kama qaban kartid naftaada. Waxaan ku hadlaa Ingiriis, Faransiis, Khmer ...
- Xafiiska wac: + 855 63 968 298
- Taleefanka gacanta / WhatsApp / Line / WeChat: + 855 92 615 288
- Facebook Messenger: Machadka Gemological ee Cambodia
- Email: info@gem.agency (waxaan ku jawaabnaa wakhti aad u kooban)
Haddii aad weli rabto in aad ka iibsato gemstone dukaanka kale sababtoo ah waxaad hubtaa inay tahay dhagax dhab ah, ka dibna weydii shahaadada. Si aad u ogaato in shahaadada dhabta ah ay tahay in ay sameeyaan qalinjabiye qalinjabiya, ee sheybaarka mira dhaliya. Shahaadooyin kasta oo kale waa been abuur
Haddii dukaanka Siem Reap uu kuu sheego in aan wada shaqayno, waa qalad. Annagu ma nala wadaagno. Tani ma ahan sababtoo ah dukaanku waxa uu haystaa hal ama laba shahaadooyin oo ay bixiyaan shaybaaradayada taasoo macnaheedu yahay in kumanaan dhagaxyo kale ah oo iibka dukaanku ay yihiin kuwo dhab ah. Waa hubaal inaad sharci u leedahay muraayadaha kale ee ay ku tusayaan shahaadooyinkeena. Haddii dhagaxyada kale ee runta ah, waxay sidoo kale lahaan lahaa mid ka mid ah shahaadada.
Ma jirto dukaanka dhagaxa dhagaxa ku yaal ee ku yaala gudaha "qaybta wax iibsiga" ee Siem Reap marka laga reebo noo. Isweydii su'aasha: Sababta? Si aad u ogaatid jawaabta, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameysid waa fahamsanahay in dhammaan dukaamada dhagax la waydiiyay TripAdvisor si looga saaro boggooda sababta oo ah waxay heleen cabashooyin ku saabsan khiyaamo.
Ogow inaanan isku dayeynin inaan waxyeeleyno gawaarida iibiya. Dhamaantoodna maaha kuwo been-abuur ah, qaar ka mid ah daacad u ah inay iibiyaan dhagaxyada dhabta ah, iyagoo aan ogeyn in muraayadahaas ay yihiin kuwo been abuur ah ama loola dhaqmo. Laakiin dhammaadka, natiijadu waa isku mid macaamilka
Oo hadda ku jira: dhagaxyo jumlada
Xasuuqii Kililka ee Hawaii ma uusan roobin dhagaxii samada
Angkor Bixinta Bangkok Bangkok GEMS iyo isku qurxiyo Fair Horyaalka Diamond Blue Diamond DeBeers De Beers GEMS muraayadaha samafalka dhagaxyo jumlada Giant Diamond Guide bogsashada kerada Jayesh Patel Waxyaalaha la isku qurxiyo Jubilee Ruby muraayadaha dabiiciga ah Furitaanka diamond pink qiimaha Royal Opal Ruby fadeexad Siem Reap Somadevi dheeman-macaan The alaab ugu quruxda badan Top alaab Tour gaar Pink World Record
Safirta xiddigeed ee synthetic: https://t.co/M8nqZ4Qd9D via @YouTube Maalmood ka hor 16
Daawada dabiiciga ah: https://t.co/gzSdlE1d5O via @YouTube Maalmood ka hor 16
Paraiba tourmaline: https://t.co/HOicGTC6yn via @YouTube Maalmood ka hor 16
Ruby xiddigta loo yaqaan 'synthetic star starty: https://t.co/LrskchkJGK via @YouTube Maalmood ka hor 16